From Van Sa Rakhita Magazine, Volume 1- Issue32008 January by Aung Zan
Fish paste of "Ngapi"(ငပိ) is very common in Myanmar. But the way it is prepared may vary from place to place. In lower parts of Myanmar, "Ngan Pyar Ye"(ငံပြာရည်) is extracted before "Ngapi" is made. But in Rakhine Land, the people don't extract fish-sauce from the paste. Therefore, Rakhine traditional "Ngapi" are more sticky and carder than the Burmese.
Rakhine traditional "Ngapi" are prepared in the cold season when the air is less humid than rest of the year. Much water from the "Ngapi" need to be evaporated from it so as to last longer, especially till the end of the rainy season. Little shrimps and fish called "Mhyine Shay"(မျှိုင်ချေ) and "Mhike Kay"(မှိုက်ကေ) are dried in the sun foracouple of days and then pounded. Such process is done during the day when the sun is hot. It is usually carried out by damsels in fishing villages. There are many folk songs leading to the skimming of fish and pounding them into "Ngapi". Good Ngapi depends on the pounding as well as the type of fish and shrimps.
There are two types of "Ngapi", "Mhyine Ngapi"(မျှိုင်ငပိ၊ မျှင်ငပိ) and "NgaNgapi"(ငါးငပိ). The taste differs, but the choice depends on the users. But the main point in making "Ngapi" is, it must be free from sand and dust. "Mhyine Ngapi" is usually pinkish in color and "NgaNgapi" are bit gray.
Rakhine people use "Ngapi" in all their fish and vegetable curries. Fish or vegetables which cannot be cooked with "Ngapi" are considered as untasty. Due to this, some fish like sardines and tuna are unpopular among the Rakhine crusine.
Best "Ngapi" fetch good price among the town and city dwellers. On the other hand, the inferior quality are eaten by poorer inhabitants living in the country or in the hills.
Nobody knows how "Ngapi" came into use. It can be traced in China, the whole of South-east Asia and some parts of Bangladesh. It may first come into use when people started to think preserving fish was scarce.
"Ngapi" being made from shrimps and little fish is rich in protein. With all the bones pounded together, it contains calcium, iodine and phosphorous. As it sends out putrid smell, some westerners may dislike, while eating it. As for most Rakhine fish as well as vegetables cooked with "Ngapi" is their tradition and specialty.
ငါးပိအကြောင်း Details ရေးထားတာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ တော်တော်လေး ရှားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် 2008 ခု ဇန်န၀ါရီလထုတ် ၀ံသ ရက္ခိတမဂ္ဂဇင်းပါ ဆောင်းပါးရှင် အောင်ဇံရဲ့ ရခိုင့်ရိုးရာ ငပိအကြောင်း ဖတ်ရှုနိုင်စေဖို့ ဝေမျှလိုက်ပါကြောင်း။
Filed Under : Arakan, Rakhine, Tradition
အင်ဂျင်နီယာများ လက်ခုပ်တီးပါ။ အင်ဂျင်နီယာများ မရှိတဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ပုံစံလေး စိတ်ကူးပုံဖော် ထားချက်လေး ကြည့်ပြီး ပြုံးကြရအောင်လား။
World Without Mechanical Engineer
World Without Aeronautical Engineer
World Without Communication Engineer
World Without Computer Engineer
World Without Electrical Engineer
Credit to Ma Thu.
“ကားပေါ်တက်ပြီးရင် ယဉ်စီးခလေးတွေ ပေးဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော်၊”
“ဟိုရှေ့က အစ်ကိုကြီး ကားခ ပေးပြီးပြီလား”
“လက်တို့တောင်းရင် ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်၊ ကိုယ့်အသိစိတ်လေးနဲ့ ကိုယ်ပေးကြပါ”
“၆နာရီ ကျော်နေပြီ။ အောက်ဆိုက်ကား ဖြစ်သွားပြီ၊ အောက်ဆိုက်ကားက အောက်ဆိုက်ကားဈေးပဲ”
“အစုတ်တွေ ပေးရင် အစုတ်တွေပဲ ပြန်အမ်းမှာနော်၊ ပြီးတော့မှ စပယ်ယာက အစုတ်တွေပဲ ရွေးအမ်းတယ် မပြောနဲ့”
ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့ မြို့တော်ရန်ကုန်ရဲ့ နိစ္စဓူဝ ကြားနေကျ အသံတွေထဲက တချို့၊ ခရီးသည်နဲ့ ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေးမှာ ငွေစက္ကူကို သုံးနေဆဲ နိုင်ငံတွေ ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အခုလို အသံဗလံတွေက အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ ခြင်္သေ့ကျွန်းလို့ ခေါ်တဲ့ ကျွန်းပိစိ နိုင်ငံလေးကို ရောက်တဲ့ခါကျတော့ ဒီအသံဗလံတွေ မကြားရဘူး ခင်ဗျ။ မကြားရဆို သူတို့က ငွေစက္ကူအစား ငွေစက္ကူတန်ဖိုး ဖြည့်တင်းရတဲ့ (ပိုက်ဆံဖြည့်ပြီး သုံးရတဲ့) Card လေး တစ်မျိုးကို သုံးပါတယ်။ အဲဒီ Card လေးထဲ ပိုက်ဆံဖြည့်ပြီး အလိုလျောက် စီးနင်းခ ဖြတ်တဲ့ စနစ်ကို သုံးလိုက်တဲ့အခါ အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ အသံဗလံတွေ ပျောက်ကုန်တော့တာပါပဲ။ အဲဒီ အသံတွေ ပျောက်ကုန်ရုံတင် မကဘူး။ စက်နဲ့ အလိုလျောက် ဖြတ်တောက်တဲ့ အခါကျတော့ ပိုတောင်းတာ၊ လျှော့ယူတာတွေ မရှိတော့ဘူး။ ပမာဏ အတိအကျလည်း ဖြတ်ယူနိုင်တယ်။ စီးနင်းတဲ့ အချိန်ကျမှ အကြွေ မပါတာမျိုး၊ ပြန်အမ်းဖို့ အကြွေ မရှိလို့ အတန်ကြီး ပေးပြီးမှ ပြန်မရတာမျိုး မရှိတော့ပါဘူး။
EZ-Link Card ကို S$ 15 ပေးပြီး ၀ယ်ယူရပါတယ်။ ကဒ်တန်ဖိုးက S$ 5.00၊ ကဒ်ထဲမှာ Deposit အနေနဲ့ S$ 3.00 ဆိုတော့ ကဒ်ထဲက လက်ကျန်တန်ဖိုး S$ 7.00 ကျန်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ကို သွားသွား၊ MRT ပဲ စီးစီး၊ LRT ပဲစီးစီး၊ Bus ပဲ စီးစီး အ၀င်မှာ ရှိတဲ့ Card Reader လေးရှေ့မှာ Card ကို တစ်ခါ ပြရ ( Flash လုပ်ရ) ပါတယ်။ ပြန်အထွက်မှာ တစ်ခါ Card ပြရ (Flash လုပ်ရ) ပါတယ်။
ဒီလို သုံးရတာ လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့ စနစ်လေးတစ်ခုကို သုံးနေရင်းနဲ့ ဒီ Card အကြောင်း သိချင်လာတာ တစ်ကြောင်းရယ်၊ Card အလုပ်လုပ်တဲ့ ပုံစံလေး သိချင်တာရယ် ကြောင့် Card ရာဇ၀င်လေးကို ရှာဖွေ မွှေနှောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သိလာသမျှ အကြောင်းလေးတွေကို ဝေမျှလိုတဲ့ ဆန္ဒကြောင့် ရေးသားလိုက် ရပါကြောင်း။
EZ-Link ကဒ်ဟာ Sony ကုမ္ပဏီရဲ့ Felica Smartcard ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ အာရုံခံစနစ်သုံး Contactless Smart Card အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စံနစ်မှာ သုံးတဲ့ ငွေပေးချေမှု စနစ်တစ်မျိုး ဖြစ်တယ်။ သက္ကရာဇ် 2001 မှာ စတင် သုံးစွဲခဲ့ပြီး အဓိကကတော့ လူသွားလူလာ အရမ်းများတဲ့ အချိန် Bus တွေမှာ အတက်အဆင်း မြန်ဆန်စေဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး အာဏာပိုင် (Land Transport Authority) ရဲ့ လက်အောက်ခံ EZ-Link Private Limited ကနေပြီး ဖြန့်ချိ၊ ရောင်းချ၊ စီမံခန့်ခွဲပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ ကဒ်အရေအတွက် 10 သန်း ရောင်းချထားပြီး ဖြစ်ပြီး၊ နေ့စဉ် ဒီကဒ်နဲ့ ငွေပေးချေမှုပေါင်း အကြိမ်4သန်း အထိ ရှိတယ်။
LTA က သက္ကရာဇ် 2000 ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ လ 26 ရက်နေ့မှာ ခရီးသွား ပြည်သူ ဦးရေ 1 သိန်းကို ကဒ်သုံးစွဲမှု အစမ်းကာလအနေနဲ့ စတင် သုံးစွဲစေခဲ့တယ်။ ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်အတွင်း MRT ၊ LRT အနည်းဆုံး ငါးကြိမ် စီးနင်းသူတွေ အတွက် ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ကဒ်ပေါ်မှာ Super Rider လို့ တံဆိပ်တပ်ထားတယ်။ စတင် သုံးစွဲသူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်စေဖို့ တစ်လအတွင်း ပုံမှန် ကျသင့်ငွေရဲ့ ဆယ်ရာခိုင်နှုံးကို ပြန်အမ်းငွေ အဖြစ် ပြန်အမ်းခဲ့တယ်။
နောက်ထပ် စမ်းသပ်သုံးစွဲမှု တစ်ခုကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ Bus အကြိမ် အရေအတွက် များများ စီးနင်းသူတွေ အတွက် စမ်းသပ် သုံးစွဲခဲ့တယ်။ အဲဒီ စနစ်အတွက် စင်္ကာပူဒေါ်လာ 134.6 သန်း တန်ဖိုးရှိ Card နဲ့ Card Reader အရေအတွက်5သန်း ပေးသွင်းဖို့ ကန်ထရိုက်ကို Motorola က ရရှိခဲ့တယ်။
MRT/ LRT နဲ့ အများပြည်သူသုံး Bus တွေမှာ စီးနင်းခ ပေးချေဖို့ အတွက် သုံးတယ်။ ကျောင်းသားတွေ၊ Singapore Armed Force၊ Singapore Civil Defense Force နဲ့ Singapore Police Force တို့က အမှုထမ်းတွေ၊ အသက် ခြောက်ဆယ်ကျော် သက်ကြီးနိုင်ငံသားတွေ အတွက် စိစစ်ရေးကဒ်ပြား၊ ခံစားခွင့်ပြု လက်မှတ် အဖြစ်လည်း တစ်ဖက်က အထောက်အကူ ပြုတယ်။ ကဒ်အသုံး ကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့ အမျှ McDonald ဆိုင်များ၊ စူပါမတ်ကတ်များ၊ စာကြည့်တိုက်များ နဲ့ အလိုလျောက် အအေး ရောင်းစက်တွေမှာပါ ငွေပေးချေမှု အတွက် သုံးစွဲနိုင်လာတယ်။ အချို့သော ကျောင်းတွေဆိုရင် EZ-Link ကဒ်ကို ကျောင်းခေါ်ချိန် မှတ်တဲ့ နေရာတို့ ကျောင်းက ရောင်းတဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာများ တန်ဖိုးပေးချေရာမှာ သုံးဖို့ စတင် လုပ်ဆောင်နေကြပါပြီ။ ဒီ စံနစ်ဟာ ဟောင်ကောင်မှာ သုံးတဲ့ Octopus Card နဲ့ အတူတူပါပဲ။
2005 ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှာ EZ-Link Pte Ltd က EZ-Link ကဒ်သည် NETS နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး EZ-Link ကဒ်နဲ့ Cashcard နှစ်ခုစလုံးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ ERP (အလိုလျောက် လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံတဲ့ စနစ်) , Bus နဲ့ MRT စတဲ့ စင်္ကာပူရဲ့ အထင်ကရ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး စနစ်3ခုစလုံးမှာ ကဒ် တစ်ကဒ်တည်းနဲ့ သုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ကဒ်စနစ်ကို 2007 ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေနိုင်မယ်လို့ မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့ အခု 2008 အထိ ထုတ်ဝေနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ 2007 ခု အောက်တိုဘာ 17 ရက်နေ့မှာ Starhub နဲ့ EZ-Link Pte Ltd တို့ ပူးပေါင်းပြီး EZ-Link ကဒ် ထည့်သွင်းထားတဲ့ တယ်လီဖုန်းစနစ် စတင်တော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့တယ်။ EZ-Link ကဒ်ရဲ့ အရွယ် အစားဟာ တံဆိပ်ခေါင်း အရွယ်သာသာပဲ ရှိပြီး တယ်လီဖုန်း တွေရဲ့ နောက်ကျောဘက်မှာတောင် ကပ်ထားလို့ရတဲ့ အရွယ်အစားဖြစ်တဲ့ အတွက် သယ်ဆောင် ကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းရာမှာ ပိုပြီး လွယ်ကူမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီ ကဒ်အမျိုးအစား စသုံး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ EZ-Link ကဒ်ပြားဟာ နောက် ငါးနှစ်လောက်မှာ လုံးဝ ပျောက်ကွယ် သွားစရာ ရှိနေပါတယ်။
212 kbps Data Rate နဲ့ Radio Frequency 13.56 MHz ကို အသုံးပြုပြီး ဆက်သွယ်မှု အမြန်ဆုံး 847 kbps ထက်တောင် ကျော်ပါတယ်။ ကဒ်နဲ့ ကဒ်ရီဒါ အကွာအဝေးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ Noise ကို ခံနိုင်ဖို့ Manchester bit coding scheme ကို သုံးထားပြီး လုံခြုံရေး စနစ် အနေနဲ့ Triple DES algorithm ကို သုံးထားတယ်။
Standard adult EZ-Link card အတွက် MRT စီးနင်းခကို S$ 0.67 ကနေ S$2.69 အထိ ပေးရတယ်။ ကင်းလွတ်ခွင့် ရသူများ ကတော့ MRT ပဲဖြစ်ဖြစ် Bus ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ကြိမ်စီးတိုင်းကို 50 cents ထက် ကျော်လေ့မရှိဘူး။ အရွယ်ရောက်သူ ကိုင်ဆောင်တဲ့ ကဒ် က တစ်ဆက်တည်း အကြိမ်ကြိမ် ပြောင်းစီးသည့်တိုင် S$ 1.90 ကျော်လေ့မရှိဘူး။ MRT စနစ်မှာတော့ တစ်ကြိမ်စီး လက်မှတ် စနစ်ရှိပြီး တစ်ကြ်ိမ်စီး လက်မှတ် မဟုတ်တဲ့ အခြား လက်မှတ်တွေထက် ကုန်ကျမှုက 1 ဆသို့မဟုတ်2ဆ အထိ ပေးရတယ်။ Standard Ticket အတွက် ပြန်လည် ထုတ်ယူလို့ရတဲ့ S$1.00 Deposit အနေနဲ့ ပေးပြီး ၀ယ်ယူရတယ်။ ၀ယ်ယူပြီး ရက် 30 အတွင်း မည်သည့် လက်မှတ်ရောင်းစက်မှ မဆို ပြန်အမ်းငွေ ပြန်လည် ထုတ်ယူနိုင်တယ်။
Standard Ticket တွေမှာ သုံးတဲ့ Smartcard နည်းပညာက ကဒ် ပြန်လည် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ ကုန်ကျမှု လောက်နဲ့ရနိုင်တဲ့ နည်းပညာပဲ သုံးထားတယ်။ စီးနင်းသူတွေက အယင်သုံးတဲ့ သံလိုက်စနစ်သုံး Card နဲ့ စီးခအပြည့်ပေးလိုကြမှုမျိုးက ပြဿနာ ဖြစ်တတ်တယ်။ EZ-Link ကဒ် စံနစ်မှာ ခရီးသည်က Card Reader ရဲ့ အလယ်နေရာကို Card ပြတဲ့ အခါမှာ ခရီးဆုံးအထိ စီးနင်းခရဲ့ အများဆုံး ပမာဏကို ဖြတ်တောက် ယူလိုက်တယ်။ ဘတ်စ်ကားက ဆင်းလို့ Card ပြားတစ်ခါ ထပ်ပြတဲ့ အခါ စံနစ်က သူဆင်းတဲ့ မှတ်တိုင်ကနေ ခရီးစဉ် အဆုံးအထိ ကျန်တဲ့ စီးနင်းခ ပမာဏကို ပြန်အမ်းပေးတယ်။ အဆင်းမှာ Card ပြခဲ့ဖို့ မေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင် အတက်ဘက်က Card Reader ဘတ်စ်ရဲ့ ခရီးစဉ်အဆုံးအထိကျသင့်ငွေ ပမာဏကို ဖြတ်ယူထားပြီးသား ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ စစချင်းမှာ အကြိမ်ကြိမ် ပြောင်းစီးတတ်တဲ့ ခရီးသည်တွေကြောင့်ဒီစံနစ်က စီးနင်းခ မှန်မှန်ကန်ကန် မရခဲ့ဘူး။ ဒုတိယနှစ်မှာ System Software တွေ Upgrade လုပ်၊ စီးနင်းခ ဖြတ်တောက်တဲ့ ပုံစံတွေ ပြောင်း စတာတွေလုပ်ပြီး ပြုပြင် နိုင်ခဲ့တယ်။ ကနေ့မှာတော့ ခရီးသည်တစ်ဦး အ၀င်Card Reader မှာ ကဒ်ပြတဲ့ အခါမှာ စက်ရဲ့ Screen မှာ Card ရဲ့ လက်ကျန် တန်ဖိုးကို ပြတယ်။ အဆင်းဘက် Card Reader မှာ ထပ်ပြတဲ့ အခါကျမှ ကျသင့်ငွေကို ဖြတ်ယူတယ်။ ခရီးသည်တွေ ယဉ်စီးခ မှန်မှန်ကန်ကန် ပေးစေဖို့ ဘတ်စ် ဒရိုင်ဘာက သေချာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ အ၀င် Card Reader မှာ Card ပြတိုင်းမှာလည်း အချက်ပေးသံလေး မြည်တယ်။ ခရီးသည်တွေ စီးနင်းခ မှန်မှန်ကန်ကန် ပေးမှုရှိမရှိ ရံဖန်ရံခါ Card စစ်တဲ့သူတွေ တက်စစ်လေ့ရှိတယ်။ EZ-Link မကိုင်ဆောင်တဲ့ ခရီးသည်တွေက ငွေစက္ကူပေးပြီး စီးနင်းနိုင်ပြီး ယဉ်စီးခ ပေးပြီးကြောင်း သက်သေခံ လက်မှတ်လေးတွေ ယူရတယ်။
EZ-Online ကတော့ EZ-Link ကပေးတဲ့ online ၀န်ဆောင်မှုပါပဲ။ ခရီးသည်တွေဟာ သူတို့ ပေးခဲ့တဲ့ ပေးချေမှု မှတ်တမ်းကို စစ်ဆေးနိုင်တယ်၊ Discount Coupon တွေကို သူတို့ Card တွေဆီကို Download လုပ်နိုင်တယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရောင်းဆိုင်တွေမှာ EZ-link card နဲ့ ငွေပေးချေနိုင်တယ်။ Sony Felica Contactless Card Reader သာ ကိုယ်ပိုင် ရှိမယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြီး တန်ဖိုး ထပ်ပေါင်းတာ လုပ်နိုင်တယ်။ ဒီ Card Reader ကို Electronic အရောင်းဆိုင် တော်တော်များများမှာ ၀ယ်ယူလို့ ရနိုင်ပြီး လက်ရှိ အချိန်အထိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 51 ခုမှာ S$ 100 ထက်မကျော်တဲ့ ငွေပေးချေမှုအတွက် သုံးစွဲနိုင်တယ်။
အချို့သော သူတွေကတော့ ကလေးသူငယ် ခံစားခွင့်ကဒ်သည် Identity Card လည်း ဖြစ်နေတာကို မေးခွန်း ထုတ်ကြတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီ Card ပျောက်ဆုံးခဲ့မယ်ဆိုရင် ပိုင်ရှင်ကို တော်တော်လေး ဒုက္ခရောက်စေတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ပိုင်ရှင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ EZ-Link Cad အသစ်ပြန်လည် ထုတ်ပေးမှုဟာ ၀န်ဆောင်ခ အနေနဲ့ S$ 20 အထိ ကုန်ကျနိုင်လို့ပဲ။ ဒီ့အပြင် EZ-Link Card ကို ကျောင်း ကန်တင်းနဲ့ Fast Food ဆိုင်တွေမှာပါ သုံးလို့ရအောင် ထပ်မံ ချဲ့ထွင် လုပ်ဆောင်တာကို အပြစ်မြင်ကြတယ်။ ခရီးသွားလာရေး အတွက် ထုတ်ပေးထားတဲ့ Card နဲ့ အစားအသောက် ၀ယ်ယူ စားသောက်လို့ ရနေတာသည် သူတို့ရဲ့ ကလေးသူငယ်များရဲ့ သွားရေစာ ၀ယ်ယူ စားသောက်မှုကို မသိနိုင် မထိန်းချုပ် နိုင်တော့ဘူးလို့ ထင်မြင်ကြတယ်။ ငွေ ပြန်ထုတ်လို့မရတဲ့ Card တန်ဖိုး S$ 3.00 ပေးဆောင်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာလည်း အချို့က သိပ်ပြီး ဘ၀င်မကျကြဘူး။ အများပြည်သူသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်မှု စနစ် တစ်ခုကို ငွေ ပေးချေဖို့ အတွက် သုံးတဲ့ ကြားခံပစ္စည်း တစ်ခု အတွက် ဘာလို့ အဖိုးအခ ပေးဆောင်ရဦးမှာလဲ စတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးလာကြတယ်။ တိုင်ပေမှာ သုံးတဲ့ EasyCard လိုမျိုး Contactless Smart Card တွေမှာ ဆိုရင် Card တန်ဖိုး ပေးဆောင်စရာ မလိုဘူး။ ရှေးဦးအစက စင်္ကာပူမှာ သုံးတဲ့ Magnetic Card System မှာဆိုရင် Card တန်ဖိုး ပေးဆောင်စရာ မလိုဘူး။ တစ်ခါသုံး Standard Card ထုတ်ပေးတဲ့ နေရာမှာလည်း ခရီးသည်ဟာ စီးနင်းပြီးတဲ့နောက် ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရောင်းစက်မှာ ပြန်သွားသွင်းရတယ်။ တကယ်လို့ ပေးသွင်းမှု မရှိဘူး ဆိုရင် Card ၀ယ်ယူစဉ်မှာ ပေးထားတဲ့ S$1 ဟာ ဒဏ်ကြေးအနေနဲ့ ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အချက် အပေါ်မှာလည်း အပြစ်တင် ပြောဆိုမှုတွေ ရှိတယ်။ ဟောင်ကောင်နဲ့ တိုင်ပေမှာ သုံးတဲ့ ပိုက်ဆံဖြည့်သုံးရတဲ့ Contactless Smart Card စနစ်၊ သံလိုက်ဓာတ်သုံး တစ်ခါသုံး လက်မှတ်နဲ့ တိုကင်နဲ့ Contactless တိုကင် ၂ ခုလုံးကို အသုံးပြုတယ်။ တစ်ခါစီး တိုကင်ကို သုံးတဲ့အခါမှာ ကျန်တဲ့ ပမာဏဟာ လက်မှတ်ဖြတ်ဂိတ်က ထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲ ပြန်လည် ထုတ်ယူနိုင်တယ်။
ဘလော့မှာ စာတွေဖတ်ပြီး မောင်လူအေးဆီ စာရေးချင်တယ် ဆိုရင် (ဘယ်သူမှတော့ ရေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ကိုယ်ထင် ကုတင် ခြေလေးချောင်း လုပ်တာပါ။) မောင်လူအေးဆီ ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ အီးမေးလ် လိပ်စာလေး ပေးချင်ပါတယ်။
စိတ်များ ညစ်သွားလား မသိနော်။ စိတ်မညစ်ပါနဲ့ဗျာ။ မောင်လူအေးလည်း အီးမေးလ်လိပ်စာကို Log In လုပ်ဖို့ ၀ဗ်ဆိုက်လိပ်စာကို မမှတ်နိုင်လို့ Bookmark Bar ပေါ်မှာ တစ်ခါတည်း မှတ်ထားရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး အီးမေးလ် လိပ်စာလေး လိုချင်သပ ဆိုရင် ဒီ လိပ်စာ လေးမှာ Sign Up လုပ်နိုင်ပါကြောင်း။ အီးမေးလ် Storage ကတော့ 1GB ပဲ ပေးထားပါတယ်။ အီးမေးလ် အမြဲတမ်း အသက်ဝင်နေစေဖို့ အနည်းဆုံး တစ်လတစ်ခါ Log In လုပ်ပေးဖို့တော့ လိုမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဝါဆို လပြည့်နေ့က မတွေ့တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ တပည့် ကျောင်းသားဟောင်း တစ်ယောက် လာကန်တော့ ပါတယ်။ မာကြောင်း သာကြောင်း ထုံးစံအတိုင်း ပြောဆိုပြီးကြတဲ့ အခါကျတော့ သူ့အလုပ်အကိုင် အကြောင်း မေးမိပါတယ်။ သူက အဆင်ပြေပါတယ် လို့ပဲ ဖြေပါတယ်။ သေသေချာချာ ဆက်ပြီး မေးတော့မှ သူ့အလုပ်ဟာ အကြီး အကျယ် အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေပါလား ဆိုတာ သိရပါတယ်။ သူ့လုပ်ငန်းက ပရိဘောဂ လုပ်ငန်းပါ။ စက်မှုဇုန် တစ်ခုမှာ စက် ယန္တရားတွေနဲ့ အလုပ်သမားပေါင်း ၁၅ဝ လောက်နဲ့ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် စကားပြော သင်တန်း လာတက်နေစဉ်က သူဟာ ကျောင်းသားပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သူငယ်ချင်း သုံးလေးယောက်နဲ့ အတူ ကျောင်းပြီး ရင် နိုင်ငံခြား သွားမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လာတက်တာပါ။
ဒါပေမဲ့လို့ သွားဖို့ စိုင်းပြင်း နေဆဲမှာပဲ သူ့အဖေ မကျန်းမာ တာကြောင့် မသွားလိုက် ရပါဘူး။ သူငယ်ချင်း တွေကတော့ ဂျပန် ရောက်သူရောက်၊ တရုတ်တိုင်ပေ သွားသူ သွား၊ သင်္ဘော တက်သူတက်နဲ့ ထွက်ဖြစ် သွားကြပါတယ်။
သူကတော့ သူ့အဖေရဲ့အလုပ် ဖြစ်တဲ့ လက်သမား အလုပ်မှာပဲ ဝင်ကူ ရပါတယ်။ သူ့အဖေက အတော်လေး နာမည်ရတဲ့ လက်သမား ဆရာကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးခေတ်က တရုတ် လက်ဖက်ရည် ဆိုင်တွေက မှန်ဗီရိုကြီးတွေ၊ ရှိုးကေ့စ်တွေ တော်တော် များများဟာ သူ့အဖေရဲ့ လက်ရာတွေ များပါတယ်။ ဆက်တီ ကုလားထိုင် ခုံတွေ ဘာတွေ လည်း လုပ်ပါတယ်။ အစကတော့ တပည့်ဟာ လက် သမား အလုပ် ဘာမှ မတတ်ပါဘူး။ အဖေ မမာတာကြောင့် စာရင်းလေး ဘာလေး ကူလုပ်ရင်း အလုပ်သမား လေးငါးယောက်ကို စီမံ အုပ်ချုပ် ပေးရပါတယ်။
အဲဒီလို လုပ်ရင်းက စာအုပ် အဟောင်းဆိုင်တွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ ပရိဘောဂ ဒီဇိုင်းစာအုပ်လေးတွေ၊ Home ဆိုတဲ့ မဂ္ဂဇင်းလေးတွေ တွေ့ ရင်ဝယ်ပြီး စုပါတယ်။ ဒီဇိုင်း နမူနာ လေးတွေကို အတုယူပြီး လက်သမား ဆရာတွေကို လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ တစ်ခါ တစ်ခါ စာအုပ်ထဲက သူ နားမလည်တဲ့ စာတွေ ယူလာပြီး ဖတ်ခိုင်းလေ့ ရှိပါ တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ လေးငါးနှစ် အတွင်း မှာ သူ့လုပ်ငန်းလေး တော်တော် နာမည်ရလာပါတယ်။ လွှတိုက်၊ ရွေဘော်ထိုး စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို စက်နဲ့ လုပ်တဲ့အထိ တိုးတက် လာပါတယ်။ ဟိုတယ်တွေ ထွန်းကားတဲ့ခေတ် ရောက်လာတော့ သူ့လုပ်ငန်း တစ် ဟုန်ထိုး ကြီးထွား လာပါတယ်။ မြို့ထဲ မှာ လုပ်လို့ မရတော့တာကြောင့် စက် မှုဇုန်မှာ ထွက်ပြီး လုပ်ရပါတယ်။ လုပ်ငန်း အားလုံးလောက် နီးနီး စက်ယန္တရား တွေနဲ့ လုပ်ပါတယ်။ မြို့ထဲမှာ ပရိ ဘောဂဆိုင်ကြီး တစ်ဆိုင်လည်း ဖွင့်ပါ တယ်။ စက်ရုံရော၊ ဆိုင်ပါ အလုပ် သမား စုစုပေါင်း ၁၅ဝကျော်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဂျပန်သွားတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းက မြို့ထဲရှိ ပရိဘောဂဆိုင်မှာ မန်နေဂျာ လုပ်နေပြီး၊ သင်္ဘော တက်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းကတော့ စက်ရုံမှာ မန်နေဂျာ ဖြစ်နေပါတယ်။ တရုတ် တိုင်ပေသွားတဲ့ သူငယ်ချင်း ကတော့ ပြန်မလာ တော့ဘူး။ အဆက်ပြတ်နေ တယ်လို့ သူက ပြောပြပါတယ်။ သူပြန်သွားတော့ ဒီခေတ် လူငယ် တွေရဲ့အကြောင်းကို ဆက်ပြီး စဉ်းစား နေမိပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂ဝ လောက်က လူငယ်တွေ နိုင်ငံခြားသွား ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသလို၊ ဒီခေတ်လူငယ် တွေလည်း ကြိုးပမ်း နေကြတာပါပဲ။ ပြောခဲ့တဲ့ တပည့်လည်း နိုင်ငံခြား သွားဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ့အတွက် ကံဆိုးတာလား၊ ကံ ကောင်းတာလား မသိသူ၊ နိုင်ငံခြား မထွက်လိုက် ရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ သူဟာ အတော်အသင့် အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်း ရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ မြန်မာ ပြည်မှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိပါ တယ်။ ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့အမြင်နဲ့ ဆိုရင် နေရာတိုင်းမှာ တိုးချဲ့လုပ်နိုင် တာတွေ ချည်းပါပဲ။ တပည့်လူငယ်သာ ရည်ရွယ်တဲ့ အတိုင်း နိုင်ငံခြား ထွက်ဖြစ် ခဲ့ရင် ဟိုမှာအလုပ်ကြမ်းတွေလုပ်ပြီး ပြန်လာတဲ့ အခါ ကျတော့ ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘဲ ပွဲစားယောင်ယောင်၊ ဘာ ယောင်ယောင်နဲ့ ဖြစ်နေမှာ သေချာပါ တယ်။ အခုတော့ ဂျပန်ပြန်၊ ကမ္ဘာ လှည့် ပြန်လာသူတွေ ကိုတောင် အလုပ်ပေးထားနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်လေး တစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီလေ။ မြန်မာ ပြည်မှာ လုပ်စရာတွေ အင်မတန်ပေါ ပါတယ်။
(ဇွန် လ ၁၇၊ ၂၀၀၈) ထုတ် အခွင့်အလမ်း ဂျာနယ် အမှတ်စဉ် ၁၄၀ ပါ စာရေးဆရာ လူထုစိန်ဝင်းရဲ့ ဆောင်းပါးကို ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားထွက်တယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယူအဆတွေ၊ အမြင်တွေ အမျိုးမျိုး ရှိတတ် ကြပါတယ်။ နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဘာတွေ ရလာမလဲ။ သေချာတာတော့ ပိုက်ဆံ နည်းနည်း ရရာကနေ ပိုက်ဆံ များများရတဲ့ နေရာကို သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကြ တာပါ။ စထွက် လာစဉ်က မျှော်လင့်ချက် တစ်ခွဲသားနဲ့ပေါ့။ ဥပမာ စင်္ကာပူဆိုရင် တစ်လ လုပ်ခလစာ ၁၈၀၀ ရမယ်။ ၁၈၀၀ ကို ၈၃၀ နဲ့ မြှောက်လိုက်ရင်.... တစ်လတာ နေထိုင် စားသောက် စားရိတ်က (ရန်ကုန်မှာ နေစဉ်က ရန်ကုန် ကုန်ကျမှုနဲ့ နှိုင်းပြီးတော့... ) တစ်လ ၃ သိန်းဆို သုံးစမ်းပါလေ့။ ကျန်တာ ခြိုးခြိုးခြံခြံ ချွေချွေတာတာနဲ့ ဆိုရင် ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံ အိမ်ပြန်ပို့ တစ်လကို ဆယ်သိန်းနဲ့ တစ်နှစ်ဆိုရင်.... ဆိုတာမျိုး ဆောက်ခဲ့တဲ့ လေထဲက တိုက်အိမ်တွေ အများအပြား။ အမှန်တကယ် ထွက်လာကြတဲ့အခါ ကုန်ကျမှုက အိမ်ခန်းငှားခတင် တစ်လ စင်္ကာပူ ၃၀၀ (မြန်မာငွေ ၂ သိန်းကျော်...) တစ်နေ့ အလုပ်သွားရတာ အမ်အာတီ စီးတာတင် အသွားအပြန် (စင်္ကာပူငွေ) ၄-၅ ကျပ်- မြန်မာငွေနဲ့ဆို ၄ ထောင်ကျော်... ရန်ကုန်မှာ အင်းစိန်၊ ဆူးလေ အသွားအပြန် တက်စီ ငှားစီးလို့ရတဲ့ ပမာဏ၊ တစ်လတာ တစ်လတာ အိမ်ပြန်ပို့တာနဲ့ အလျင်မီအောင် မနည်းသုံးနေကြရ။ ဒါက စင်္ကာပူနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမား အများစု ကြုံဆုံနေကြရတဲ့ ဘ၀။
နိုင်ငံခြားထွက်ခြင်းသည် မှန်ကန်တဲ့ အဖြေတစ်ခုလား။ အခု လောလောလတ်လတ် နာဂစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ စင်္ကာပူကို ရွှေမြန်မာ အလုပ်သမားများတထောကြီး လှိမ့်ဝင်လာကြတာ တွေ့ရတယ်။ အလုပ်သမားက များပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းတဲ့ အလုပ်အပြောင်းအရွှေ့အေးတဲ့ အချိန်ကာလဆိုတော့ အချို့ အလုပ်မရဘဲ ပြန်ကြရသူတွေ ရှိတယ်။ အေးဂျင့်နဲ့ လာသူတွေကလည်း အချိူ့ အဆင်ပြေတယ်၊ အချို့ အဆင်မပြေဘူး ဆိုတာတွေ နည်းပေါင်းစုံ ကြားနေကြရတယ်။ သေချာတာ တစ်ခုက အဆင်ပြေသည် ဖြစ်စေ အဆင်မပြေသည်ဖြစ်စေ မိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ အတွက် မိမိသည် ပထမဦးစားပေး လူတန်းစား စာရင်းထဲ မပါတာ သေချာတယ်။ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကြားမှာ လူမျိုးခြားတွေကြားထဲ အနှိမ်ခံပြီး အလုပ်လုပ်ရဖို့ အရေး သိန်း လေးဆယ်လောက် ရှိတဲ့ ငွေပမာဏကို အထုပ်ထုပ်ပြီး ကိုယ်ထွက်ရမဲ့ အလှည့်ရောက်ဖို့ စောင့်နေကြရသူတွေ အများကြီးလို့ ကြားသိရပါတယ်။
Brain Drain တို့၊ Human Resource တို့ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ ထည့်သုံးရင် အရမ်း စာလေးသွား ပါလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးတာက နိုင်ငံခြားထွက်သည် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံခြား မထွက်သည်ဖြစ်စေ အချိန်တစ်ခုမှာ မိမိနိုင်ငံမှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်နိုင်စေမဲ့ ပညာရပ်မျိုး ကျွမ်းကျင်မှုမျိုးနဲ့ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားမယ် ဆိုရင် နိုင်ငံခြားပဲ နေနေ၊ မြန်မာပြည်မှာပဲ လုပ်လုပ် အချိန်တစ်ခုမှာ အလုပ်ဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာ အမှန်ပါပဲ။ နိုင်ငံခြားတော့ ထွက်လိုက်ပါတယ်။ အချိန်ကာလတစ်ခု အထိ ကြိုးစား ပိုက်ဆံစုခဲ့တယ်။ ပြန်လည်းလာရော ပိုက်ဆံက လွဲပြီး ဘာမှ ပြန်ပါမလာရင်တော့ ရှာလာတဲ့ ပိုက်ဆံ သုံးလို့ ကုန်သွားတဲ့ အချိန်မှာ နိုင်ငံခြား နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ထွက်နေရဦးမှာပါ။ နိုင်ငံခြားက ရှာလာတဲ့ ပိုက်ဆံသည် ရင်းနှီးစားသောက်ရန် အတွက်ပါ။ ရင်းနှီးစားသောက်ရန် အတွက်လို့ ဆိုတဲ့အတွက် ကိုယ်မြန်မာပြည်ပြန်သွားတဲ့အခါ ဘာလုပ်ငန်းနဲ့ ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်စားသောက်မလဲ။ အိုင်တီပညာရှင်က အိုင်တီလုပ်ငန်းနဲ့ ဆက်လက် အသက်မွေးပြီး၊ အင်ဂျင်နီယာက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးခဲ့ရင်တော့ ပြောစရာမရှိပါ။ သို့ငြားလည်း ပညာရပ်များသည် အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ပြောင်းလဲ တိုးတက်နေတဲ့ အတွက် ပြောင်းလဲလာတဲ့ နည်းပညာများနဲ့ အညီ မျက်ခြေမပြတ် ထိတွေ့မှုရှိနေမှသာလျှင် တစ်ချိန် ပြန်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ရင်းနှီးလုပ်ကိုင် စားသောက်ဖို့ အဆင်ချောပါလိမ့်မယ်။
အများစုသော ပြည်ပရောက် ရွှေမြန်မာများ (မောင်လူအေး အပါအ၀င်) က ရောက်တဲ့နေရာ၊ ကျရာတာဝန်တွေ ထမ်းရွက်ပြီး နောက်ထပ် ရှေ့ဆက်သွားဖို့ မတွေးနိုင်ကြဘူး။ မတွေးနိုင်ကြတာသည်လည်း သူတို့ချည်းရဲ့ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်တွေက ပင်ပန်း၊ ရတဲ့ အချိန်သည်ပင်လျှင် ရွှေဆိုတာမျိုး ရသမျှ အချိန်လေးအတွင်းမှာ အတင်း ကုတ်ကပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ပိုက်ဆံစုဖို့ချည်းပဲ လုံးပမ်းနေကြရင်း အနာဂတ်ကို မေ့နေကြတာပါ။ နေထွက်ကနေ၀င် အချိန်တော်တော်များများက လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ။ ဘယ်ကလာ အခြားအချိန်ရှိရမလဲ။ သို့ကလို နေရင်း နေရင်းနဲ့ တစ်ရက်က တစ်လ၊ တစ်လက တစ်နှစ်၊ တစ်နှစ်ကနေ လေး၊ငါးဆယ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်တွေ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးတဲ့ ကအချိန်မှာ ရှာလိုက်၊ ရလိုက်၊ သုံးလိုက်နဲ့ သံသရာ စက်ဝန်းထဲက မထွက်နိုင်ဘဲ တ၀ဲလည်လည်နဲ့ ရသုံးကုန်၊ရသုံးကုန် ချည်းထပ်ကာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်သည်သာ ကြံရည်စက်ထဲ ထည့်ကြိတ်လိုက်တဲ့ ကြံဖတ်များသဖွယ် အနှစ်တွေ ကုန်ကုန်ကုန်ရင်း နောက်ဆုံး တစ်သက်တာ အလုပ်သမား ဘ၀နဲ့ ကျင်လည်ခဲ့ကြရသူများ မိမိတို့ ရှေ့တွင်ပင် အမြောက်အမြားရှိနေတာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။
ဆိုတော့ကာ ဘာလုပ်ကြရမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ တွေးဖို့လိုပါမယ်။ ပြည်ပထွက်လာခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အန္တိမ ရည်မှန်းချက် မဟုတ်သေး။ အိမ်အပြန် ခရီးအတွက် ကျွန်တော်တို့မှာ ပြင်ဆင်စရာ ရှိတာတွေ ပြင်ဆင်ကြဖို့ လိုနေပြီ။ ဘာတွေပြင်ဆင်ကြမယ်၊ ဘာတွေ ဘယ်လို လုပ်မယ်ဆိုတာ ကတော့ သူငယ်ချင်းတို့ လျှောက်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့ အဓိက မူတည် သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆရာလူထုစိန်ဝင်းပြောသလို မြန်မာပြည်မှာလည်း လုပ်စရာတွေ အများကြီးပါ။ မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်သမားဘ၀သည်သာ ၀င်ငွေနည်းလို့ ပြည်ပထွက် အလုပ်လုပ်ကြရပေသည့် အလုပ်ရှင် အနေနဲ့သာ အလုပ်လုပ်မယ်ဆို အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနေဆဲပါ။ ဘာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းတယ်ဆိုဆို၊ ဆိုးတယ်ပြောပြော လူဦးရေ သန်း၆၀ နေထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ လုပ်စရာ အလုပ်တွေ တပုံကြီးရှိနေတာ ပုံပြင်မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ဘာလာရှာတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တာ ကျွန်တော်တို့ ရခဲ့ပြီလား။ ဘယ်အချိန် အတိုင်းအတာလောက်ကြာရင် ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်မှန်းထားသလဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ်ပြန်ရင်ရော ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ခွင့်ရဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို Resource တွေ လိုမလဲ။ ဒါတွေကို ဘယ်လိုရှာပြီး ဘယ်လို အသုံးချမလဲ။ ပြည်ပ မရောက်ခင်တုံးက ပြည်ပထွက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြသလို၊ ပြည်ပကို ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ပြည်တော်ပြန်ဖို့ စီစဉ်ကြရမယ်။ ဒါမှသာလျှင်လည်း မိမိတို့ မျှော်မှန်းတဲ့ အန္တိမ ပန်းတိုင်ကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပြီး ပြည်ပထွက်ခြင်းသည်လည်း အနှစ်သာရရှိတဲ့ ပြည်ပထွက်ခွာခြင်းလို့ မည်မှာဖြစ်ပါကြောင်း။
အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး စင်္ကာပူမှာ မြန်မာ ကျောင်းသားတွေ အမြားအပြား တက်ရောက် ကြတယ် ဆိုတဲ့ တီးမားဆက် ပိုလီတက်ကနစ်ကို ရောက်ခဲ့တယ်။ အင်ဂျင်နီယာ အတတ်ပညာ သင်ကြားတဲ့ ကျောင်းဖြစ်တဲ့ အားလျော်စွာ မောင်လူအေးတို့ရဲ့ တစ်ချိန်က စက်မှုလက်မှု သိပ္ပံ ခေါ်တဲ့ ဂျီတီအိုင်ကို သွား သတိရမိတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံဟာ တီးမားဆက် ပိုလီတက်ကနစ်ကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာမှ စဖွင့်ခဲ့ပြီး အချိန်တိုလေး အတွင်းမှာ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံတကာ တန်းဝင် စက်မှု ပညာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်း အနေနဲ့ တည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
စက်မှုလက်မှု သိပ္ပံကို ၁၈၉၆ မှာ စတင် တည်ထောင်ခဲ့လို့ ၁၉၉၆ တုံးက အင်းစိန် စက်မှုသိပ္ပံ နှစ်တစ်ရာပြည့်ပွဲတောင် ကျင်းပခဲ့တယ်။ စတင် တည်ထောင်ချိန်မှာ မြန်မာပြည်မှာ စက်မှု သက်မွေးပညာများ သင်ကြားနိုင်ရေး အတွက် ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်၊ မန္တလေး ပခုက္ကူ စတဲ့ နေရာတွေ မှာ ကျောင်းတွေ ဆက်ဖွင့်သင်ကြားခဲ့တယ်။ စတင်ခဲ့စဉ်ကတည်းက စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ ဟာ အငယ်တန်း အင်ဂျင်နီယာများ မွေးထုတ်ပေးရာ ကျောင်းတော် တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပညာသင်နှစ် ၅ နှစ် အပြည့်တက် ရောက်ပြီး စက်မှု အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို ယူဖို့ အခက်အခဲ ရှိသူများ အတွက် အချိန်တို (ပညာသင်နှစ် ၃ နှစ်တည်း) နဲ့ တက်ရောက်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် အသုံးချ အတတ်ပညာတွေကို သင်ပေးခဲ့တယ်။ ဒီကျောင်းက ဆင်းလာတဲ့ A.G.T.I လက်မှတ်ကိုင် အငယ်တန်း အင်ဂျင်နီယာ များသည်လည်း နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေး နေရာ အမြောက်အမြားမှာ တာဝန်တွေ ကိုယ်စီ ယူခဲ့ကြတယ်။
စက်မှုသိပ္ပံရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းက စစချင်း ပထမနှစ်တက်တဲ့ အခါမှာ မိမိ တက်ရောက်လိုတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်ရပြီး တက်ရောက်လိုတဲ့ ဘာသာရပ်နဲ့ မိမိရမှတ်နဲ့ ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင် လျှောက်ထားတဲ့ ဘာသာရပ်ကို တစ်ခါတည်း တက်ရောက်ခွင့်ရတယ်။ ပထမနှစ်မှာပဲ Civil က Civil စာ စသင်ရတယ်။ EP က EP စာစသင်ရတယ်။ စာသင်နှစ် တစ်နှစ်ကို ၁၀ လ တက်ရောက်ရပြီး ၃ နှစ် တက်ရောက်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ အောင်မြင်တယ် ဆိုရင် AGTI လက်မှတ် ပေးအပ် ချီးမြှင့်တယ်။ နောက်ဆုံးနှစ်မှာ တကယ်လို့များ အမှတ် မီတယ်ဆိုရင် နောင်တော် တက္ကသိုလ် ဖြစ်တဲ့ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကို ဆက်လက် တက်ရောက် နိုင်စေဖို့ ၀င်ခွင့်ဖြေဆို တက်ရောက်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အခွင့်အလမ်းမျိုး ပေးခဲ့တယ်။
စက်မှုတက္ကသိုလ်ကတော့ ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်ကို ဘာသာခွဲခြင်း မရှိဘဲ အခြေခံ အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်များကို စုပေါင်း သင်ကြား ရပြီးတဲ့နောက် ဒုတိယနှစ်ရဲ့ ရလဒ်ကိုကြည့်ပြီး ဘယ်ဘာသာ တက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုတာ ရွေးချယ်ရတယ်။ စာသင်နှစ် ၅ နှစ်မှာ တတိယနှစ်ကနေ ပဉ္စမနှစ်အထိ အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်များကို ၃ နှစ် သင်ကြားရတယ်။ ရှေးယခင် တုံးကတော့ စက်မှုသိပ္ပံ ၀င်ခွင့်ကို စာမေးပွဲနဲ့ ဖြေဆိုရပြီး ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းမှာ ဆယ်တန်းရ အမှတ်ကို မူတည်ပြီး ၀င်ခွင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
၁၉၉၈ နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လို ပညာရှိမျိုးက ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်လိုက်တယ် မသိပါဘူး။ GTI ကို GTC ရယ်လို့ အသွင် ပြောင်းလိုက်တယ်။ စစချင်းမှာ GTC သည် GTI ကို အမည် ပြောင်းထားရုံက လွဲပြီး ဘာမှ မထူးခြားတော့ သိပ်သိသိသာသာ မရှိလှပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ GTC = စက်မှုတက္ကသိုလ် ပထမ ၂နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။ စစချင်း GTI ကို GTC အဖြစ် ပြောင်းစဉ် ကတည်းက ဘယ်လိုပဲ ပညာရေး အဆင့်မြှင့်တယ် ပြောပြော Institute သည် College နဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်း မတူသလို၊ သက်ရောက်လည်း မတူတာအမှန်။ သို့ငြားလည်း ပြောင်းဆိုတော့ ပြောင်းပေါ့။ Institute နဲ့ University တုံးက ကိုယ့်ရပ်တည်မှုနဲ့ကိုယ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ စက်မှုလက်မှု သိပ္ပံကို စက်မှုတက္ကသိုလ်ရဲ့ ပထမ၂ နှစ်ထဲ ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါ GTI ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ အခုအချိန်မှာ AGTI ဆိုတာ GTC က B.Tech ဆက်တက်ဖို့ အဆင့်မမီလို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားများ ကိုင်ဆောင်ရတဲ့ လက်မှတ် အဆင့်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ နှစ်ပေါင်းရာချီပြီး အခိုင်အမာရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ပညာရည်တိုက်ကျွေးခဲ့တဲ့ စက်မှုသိပ္ပံတွေ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီ။
သူများနိုင်ငံတွေမှာ စက်မှုသိပ္ပံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု အဆင့်ရောက်လာဖို့ အလွန်တရာမှ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်း အားထုတ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာတော့ ရှိပြီးသား သမိုင်းဝင် နှစ်ပေါင်း ရာချီနေတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီး တစ်ခုကို တိမ်မြုပ် ပျောက်ကွယ်သွားအောင် ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း။ ဆက်လက် တွေးခေါ်နိုင်ဖို့ ဝေမျှခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။
Filed Under : AGTI, Sharing
ဆို - R ဇာနည်
Rဇာနည် - ခွင့်လွှတ်တယ် ခွင့်ပြုတယ်
အလှမ်းဝေးတဲ့ လမ်းတွေနောက် မထူးခြားလည်း အရိပ်လိုတစ်ကောက်ကောက်နဲ့လိုက်
အကြင်နာကို မျှော်လင့် မင်းသိရဲ့လား တမ်းတမိတယ် ချစ်သူလေးရယ်....
ယူမယ်... အလွမ်းလေးများ ပေးခဲ့ရင်လည်း ပေးလိုက်စမ်း အနမ်းလို့ တို့ သတ်မှတ်မယ်
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို စွန့်ပစ်ခဲ့လည်း မင်းလေးနားမှာ အမြဲရှိမယ်
ရှင်သန်ချိန်တိုင်း ကိုယ် စောင့်...ရ...ဦး....မယ်.... အိုအချစ်အတွက်
တစ်နေ့တော့ ပျော်.....ချင်.....တယ် အို ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀မှာ ... ပျော်နိုင်မလား....
အသည်းလေးများ ခွဲလည်းကိုယ် ခွင့်ပြုမှာ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ တွဲလည်း ကိုယ် ခွင့်လွှတ်တာ
ကိုယ့်ရဲ့ အလှည့်ရောက်လို့လာမလား ...တဖြည်းဖြည်း မင်း အနားမှာ စိတ်ဓာတ်ကျကာ
ဘယ်အချိန်မှာ အချစ်များ ကိုယ့်အတွက်လည်း အို့ ချစ်သူ နားလည်ပါ
ပြန်လာနိုင်မလား အတုံ့အလှည့်အချစ်တွေ ကိုယ့်အတွက် သီးသန့် ပိုင်ချင်တယ်
ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀မှာ သိပ်ချစ်လို့ကွယ် ..အပိုင်ရချင်တယ်...
မေ့နေလား မင်းရဲ့အနား အရိပ်လိုပဲ.... အမြဲတမ်း ကိုယ် ရှိနေလဲ အဝေးကိုပဲ ငေးနေဆဲ...
ဘေးနားက ပြောနေလဲ မောရုံပဲ အေးစက်ဆဲ...ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက်ဟာ ရင်ခွင်တွေ တကယ်ယကို ဝေးနေ...
အားလုံးထက် မင်းကိုယ် သိပ်ချစ်တာ....အားလုံးထက် မင်းလေးကို ခွင့်လွှတ်တာ သူမသိဘူး.....
တကယ်ဆိုရင် ကိုယ်မင်းအတွက် အသက်ဆက်လာ .... ရုန်းထွက်ဖို့ ကိုယ့်ဘ၀မှာ မလွယ်တော့ပါ..
P.S ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က သီချင်းလေးတွေ ကောင်းတယ်လို့ ညွှန်းလို့ နားထောင်ဖြစ်ရာက သီချင်း စာသားလေး လိုက်ကုးဖြစ်ရင်... ကိုယ်နားထောင်ဖြစ်သလို သူငယ်ချင်းတွေလည်း နားထောင်ရအောင် Share လိုက်ခြင်းပါ။ Album တစ်ခုလုံးကိုတော့ www.myanmarmp3.net ထဲမှာ Download လုပ်နိုင်ပါကြောင်း။
ချက်ခြင်းနှင့် သင့်မြတ်ကြသူများ အတွက် Chat Dictionary
အင်တာနက် သုံးသူတိုင်း Chatting နဲ့ မကင်းကြပါဘူး။ Chatting ပြောတဲ့ခါကျတော့ တချို့က English လို၊ တချို့က ဗမာလို ရေးပြောကြ၊ တချို့က ဗမာ အသံထွက်ကို English စာလုံးနဲ့ ပေါင်းပြီး Burglish နဲ့ပြောကြတယ်။ အခုခေတ် Chatting စသုံးတဲ့ လူငယ်တွေတော့ ဘယ်လိုနေတယ် မသိ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ခန့်က အင်တာနက်ကို စတင်ထိတွေ့ဖူးတဲ့ မောင်လူအေးအဖို့တော့ asl ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ gf ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိနဲ့ တော်တော်လေး ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ အခု နောက်ပိုင်း Chatting ပြောသူတွေကတော့ တော်တော်လေး ထိသိနားလည်လွယ်တာ တွေ့ရပြီး စကားလုံးပေါင်းများစွာကို သိပြီးသားသူတွေများပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ စကားလုံးဆိုတာမျိုးက တစ်နေ့တစ်မျိုး၊ အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတတ်တာမျိုးဆိုတော့ အသစ်အသစ်တွေထဲက မသိတာတွေရော၊ အဟောင်းတွေထဲက ကိုယ်မသိသေးတာတွေရော ရှာဖွေနိုင်ဖို့ Chat Word Dictionary လေးကို ၀င်ရောက်ရှာဖွေနိုင်စေဖို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ချက်ခြင်းနှင့် သင့်မြတ်ကြသူများ အတွက်ကတော့ တစ်နည်းတစ်လမ်း ထောက်ကူနိုင်စေမဲ့ Dictionary လေးတစ်ခုပါ။